🥇 ▷ Laptop-ka Ugu Degdegga ah 2019 - Laptop-yada ugu awoodda badan Dhamaantiin… ✅
Laptop-ka Ugu Degdegga ah 2019 – Laptop-yada ugu awoodda badan Dhamaantiin…
Waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay in laga fiirsado marka aad iibsanayso laptop cusub. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu helo mashiin la awoodi karo oo leh isku-dheelitirnaan kaamil ah oo tayo leh, wax-qabad, iyo nolosha batteriga ee ku habboon. Ka dib markaa waxaa jira shaashad laga fakaro: ma waxaad rabtaa shaashad caadi ah ama shaashad taabasho iyo xallin noocee ah? Tayada keydinta iyo isku xirnaanta ayaa muhiim ah, dabcan, sidoo kale nidaamka qalliinka.
Ma fududa in la yiraahdo kan kore waa kan ugu muhiimsan maxaa yeelay, dhab ahaantii, wax walba waa muhiim. Si kastaba ha noqotee, haddii uusan sifiican u shaqeynin, kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo runtii heli kara qiime. Si kastoo ay u egtahay sida uu u egyahay shaashadda 4-aad ee macaan ee 4K taabatay ama inta dhuuban, iftiinka iyo ifka u jaban yahay, waxaad isla markiiba ka shalaayi doontaa iibsashada haddii aadan gudan karin howlaha maalinlaha ah ee aad dejiso adigoon hoos u dhigin. Halkaas ayaa hagahan ku soo galay.
AKHRI MARKA: laptop ugu fiican sanadka
Halkan Falanqaynta Khabiirka, waxaan u isticmaalnaa halbeegyo buuxa oo kambuyuutar kasta oo aan dib u eegno, annaga oo cabirayna wax kasta laga soo bilaabo tayada shaashadda iyo batteriga nolosha illaa kaydinta iyo awooda ciyaarta. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu horeeya ee aan sameynay waxay ahayd waxqabadka tijaabada. Ka dib markii aan tijaabinay waxqabadka CPU ee boqolaal laptops ah, waxaan u kala soocnay natiijooyinka si aan u tusno labaatanka kumbuyuutar ee ugu dhakhsaha badan ee aad iibsan karto maanta. Aqri si aad u ogaato waxa ay yihiin iyo sida loo tijaabiyo.
Laptopka ugu dhakhsaha badan: sida aan u tijaabino
Si loo tijaabiyo xawaaraha laptop-ka, waxaan adeegsanaa codsi gudaha ah oo la yiraahdo Bench. Waxaan u abuurnay Bench aalad loo adeegsado tijaabinta waxqabadka guud; Si ka duwan GeekBench 4, oo kaliya cabbiraya xawaaraha CPU, Bench wuxuu ku lug leeyahay nidaamka oo dhan. Hal shay, tani waa imtixaan walaac badan marka loo eego tijaabada xawaaraha processor-ka.
Asal ahaan, appku wuxuu ku qasbayaa laptop-ka inuu socodsiyo howlo iskuqasan oo adag oo ku saabsan muuqaalka 4K iyo faylasha fiidiyowga, ka dibna wuxuu ku socodsiiyaa tijaabooyin badan oo multitasking ah. Hawlahan isku-dhafan ayaa loogu talagalay in lagu meeleeyo CPU-ga, laakiin waxay sidoo kale caqabad ku tahay laptop-ka GPU (ha noqoto mid isku-dhafan ama hibeysan), oo ay weheliso xusuusta, kaydinta, iyo nidaamyada maareynta kuleylka.
Markuu Bench wado barnaamijkaaga, wuxuu soosaaraa saddex natiijo: dhibic sawir, dhibic fiidiyow, iyo dhibcayo badan, oo matalaya sekanno. Dhowr ilbidhiqsi ayaa ka fiican maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay laptop-ka inuu si dhakhso leh imtixaanka u dhammaystiro.
Marka xigta, waxaan qaadanaa saddex natiijo oo waxaan xisaabineynaa natiijada ugu dambeysa. Sida ugu dhakhsaha badan laptopku wuxuu u dhammaystiraa tijaabada kursiga keydka, natiijada ugu weyn natiijada guud. Xisaabintan waxay ku saleysan tahay halbeega saamiga ah ee 100, kaasoo lagu gaadhay laptop laptop ah oo loo yaqaan ‘Intel Core i5-4670K’ oo aan ku tijaabinay markii ugu horreysay ee Bangiga la sameeyo. Marka la barbardhigo dhibcaha imtixaanka shaqsiyadeed ee labaad, halka ay ka yaryihiin, tirooyin badan ayaa ka wanaagsan marka loo eego natiijooyinka guud ee Bench.
AKHRISO CODKA: Telefoonada casriga ah
Kahor intaanan socodsiin Bangiga, waxaan hubineynaa laptop-ka inuu ku xiran yahay il koronto ka dibna aan u dhigno qaabka ugu sareeya ee waxqabadka. Windows 10 laptops-yada, tan waxaa laga samayn karaa shaashadda hawsha adoo gujinaya calaamadda batteriga isla markaana dhaqaajinaya kala-boodhka habka awoodda una dhigaya “Waxqabadka ugu Fiican”. Dejimaha awooda kombiyuutarka laptop-ka ayaa si sax ah loogu habeyn karaa qaybta “Awooda Awoodda” ee ku taal qeybta xakameynta. Waxaan sidoo kale xirnaa dhammaan dalabyada kale waxaanna baabi’innaa Wi-Fi inta lagu jiro imtixaanka.
Laptops-yada khamaarka leh ee leh sawiro gaar ah ayaa had iyo jeer lagu rakibay boodhadh kontorool oo gaar ah. Qaado Alienware, taas oo rakibaysa barnaamijka Taliska ee Alienware Center si ay u siiso dadka isticmaala xakameyn dheeri ah oo ku saabsan qaabeynta qalabka, laga bilaabo waxqabadka CPU iyo GPU illaa xawaaraha taageereyaasha. Xaaladaha qaarkood, xitaa waa suurtogal in la dhaafo laptop CPU laptop ka baxsan inta jeer ee turbo, inkasta oo tani aysan had iyo jeer dammaanad ka qaadaynin natiijada Bench maxaa yeelay waxay dhalin kartaa kuleyl aad u badan oo sababi kara jahwareer kuleyl, halkaas oo CPU qaan gaadhnimo ay hoos u dhigto. yaree heerkulka.
Laptopka ugu dhakhsaha badan: natiijooyinka
Marka hore, gafi. Jadwalka natiijooyinka ee hoos ku yaal wuxuu muujinayaa moodada CPU ee ku xigta magaca kombiyuuter kasta iyo guud ahaanba waa run in processor-ka awooda badan uu ku guuleysto natiijooyinka ugu wanaagsan imtixaannadan keydka. CPU wax walba maahan. Sida aan kor ku soo sheegnay, dhibcaha ayaa sidoo kale saameyn ku leh RAM iyo GPU ee laptop, halka hufnaanta nidaamka qaboojinta ay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan.
Baahida, garaafku ma muujin karo macluumaadkan oo dhan, aad buu u buuxsan yahay. Markaa ka hor intaadan ku boodin inaad iibsato kombuyuutar laptop ah oo ku saleysan natiijooyinka bangiga, xusuusnow in faahfaahinta kale ay muhiim yihiin, sidoo kale. Waxaan leenahay dib-u-eegis buuxa ee dhammaan kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada ee miiska waxaadna ka arki kartaa meelaha saxda ah ee aan tijaabinay.
Haddana imminka labaatanka shax ee ugu sarreeya. Goor dhaw ayaad arki doontaa inuu jiro faraq weyn oo wax qabad ah oo u dhexeeya labada qalin ee ugu horreeya. Maxay u kala duwan yihiin?
Si sahal ah, Deegaanka Alienware-51m waa xayawaan dhammaystiran. Laptop-ka Ciyaarta ee £ 4,000 wuxuu isticmaalaa Intel Core i9-9900K CPU (ilaa 5GHz) 9-Gen, 32GB RAM iyo Nvidia GeForce RTX 2080 GPU si loo gaaro natiijooyinka ka soo baxa ciyaaraha kombuyutarka kombiyuutarka ee aadka u sareysa. Unugga awoodda labaalaha ahi wuxuu awood u leeyahay 510W cajiib ah, halka nidaamkiisa qaboojinta ee caqliga badan uu qaboojiyo heerkulka gudaha. Dhibcaha Bench waa 310, taasoo ka dhigaysa laptop-ka ugu dhakhsaha badan ee aan tijaabinay mana rajeynayno in mustaqbalka dhow laga adkaado.
Guji si aad u ballaariso
Mustaqbalka dhow waa Acer Predator Helios 500 oo leh dhibco ah 215. Waxay weli ahayd mid aad u dhakhso badan markii aan dib u eegnayna dabayaaqadii 2018 waxay ahayd laptop-ka ugu dhakhsaha badan ee aan aragnay. Waxaan ugu magacdarnay laptop-ka ciyaarta ugu fiican ee loo yaqaan ‘The Reviews Reviews Product’ Abaalmarinta Sanadka ee 2019ka iyadoo la aqoonsanayo awooda ciyaaraha aan caadiga ahayn iyo awooda, iyo £ 2,200, qiimaha ayaa aad uga badan awoodiisa badan aaga 51m. Bronze wuxuu aaday Asus ROG Strix Scar III, kaas oo lagu afduubay tijaabada keydka si loo gaaro dhibic cajiib ah oo ah 210.
Markaan fiirineyno afarta laptop-yada soo socda, isbeddel muuqda ayaa soo baxay. Sida seddexda hore, dhammaantood waa laptops ku jiheeya ciyaaraha ciyaarta oo leh awood sare oo CPU ah, xaddi badan oo RAM (16GB ama ka badan), iyo kaararka naqshadeynta u go’an. Qalabka kombuyuutarrada lagu ciyaaro ee Gaming-ka ku dhisan ayaa aasaas ahaan ah mid aad u dhakhso badan oo shaqo weyn, iyo sidoo kale faa’iido u leh goobaha PUBG.
Dhanka kale, laptops aad u xoog badan waxay leeyihiin nolosha batteriga gaagaaban waxayna u muuqdaan kuwo aad u culus, taasoo ka dhigaysa kuwo aad uga macquulsan moodooyinka dhaqameed badan.
AKHRISKA LA SOO SAARO – Nolosha batariga laptop ugu fiican – kumbuyuutar noocee fog fog?
Laakiin ma ubaahantahay laptop laptop ciyaarta si aad si dhaqso leh wax u qabatid? Runtii maaha. Sideedaad, waxa lagu amaano karo waa Dell XPS 15 (2018) Waxaa soo saaray Intel Core i7-8750H 8-Gen, oo ku gaadhay dhibco guud oo ah 178 dhinaca Bangiga. Taasi waxay ahayd natiijo wax ku ool ah waxayna ka dhigtay XPS 15 laptop-ka deg-degga ah ee ciyaarta ugu dhakhsaha badan ee ay tahay inaan tijaabino. Xitaa wax yar oo ka adkaaday Razer Blade 15 (2019), oo ah mishiinka ciyaarta oo dhakhso badan oo isku dhafan oo maamula 174 ee tijaabooyinkayaga keydka.
Waxaad ka heli doontaa dhowr Apple Alaabta liistada ku taal laptops ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan. Oo haddii aad raadineyso Apple ee ugu awoodda badan Mashiinka suurtagalka ah, waxaad ubaahantahay inaad iibsato 15-inch MacBook Pro (2018), kaasoo ku shaqeeya Intel Core i9-8950HK isla markaana dhibcaha 173 The 2018 13in MacBook Pro waa wax yar ka hooseeya liiska oo leh dhibco ah 150. Si kastaba ha noqotee, wali waa ka dhakhso badan tahay 2017 marka loo eego MacBook Pro 2017.
AKHRISO Tijaabada: laptop-ka ciyaarta ugu fiican
Labaatankii laptops ee liiskan ayaa soo baxay dhowaan, sannadihii la soo dhaafay, taas oo daliil aan la dafiri karin ku ah horumarka la yaabka leh ee tikniyoolajiyada kombuyuutarka. Tusaale waa Acer Predator 21X laga soo bilaabo dhammaadka 2017. Markii ay bilaabatay (qiimo qaali ah oo ah £ 9,000), waxay ahayd mid ka mid ah kumbuyuutarrada ugu awoodda badan ee aan helnay. Dhibcood oo gaaraya 128, oo xilligaas ahaa mid cajiib ah, ayaa hadda u muuqda kuwo wax lagu qoslo marka loo eego ciyaartoydii ugu sarreysay sannadka 2019.